Inona ny SEO Organika? | Martech Zone
Inona ny SEO Organika?
Zoma, Martsa 7, 2014 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Raha te hahatakatra ny fanatsarana ny motera fikarohana ianao dia tena mila mijanona tsy mihaino ireo ao amin'ny orinasa mitady tombony amin'izany ary mandraho fotsiny ny torohevitr'i Google. Ity misy fehintsoratra tsara iray avy ao amin'ny Torolàlana Starter Optimization Optimization Search Engine:
Na dia misy ny teny hoe "motera fikarohana" aza ny lohatenin'ity torolàlana ity, tianay ny milaza fa tokony hiorenanao voalohany indrindra amin'ny fanapaha-kevitra ny fanatsarana ny zava-bita tsara indrindra ho an'ireo mpitsidika ny tranokalanao. Izy ireo no mpanjifa lehibe indrindra amin'ny atiny ary mampiasa milina fikarohana hitadiavana ny asanao. Ny fifantohana mafy loatra amin'ny tweaks manokana hahazoana ny laharana amin'ny valin'ny organika an'ny motera fikarohana dia mety tsy hanome valiny tadiavina. Search engine optimization dia ny fametrahana ny tongotra tsara indrindra amin'ny tranokalanao raha ny fahitana azy amin'ny motera fikarohana, fa ny mpanjifanao farany dia ny mpampiasa anao fa tsy ny motera fikarohana.
Google dia manana torohevitra matanjaka ao manakarama ny mpanolo-tsaina SEO manaraka, koa. Tsotra ny torohevitro ho an'ny mpanjifa… ampiasao sehatra miaraka amin'ireo fitaovana navelan'i Google, ary avy eo manangana, mizara ary mampiroborobo izany atiny izany amin'ny alàlan'ny tetikady marketing lehibe. izany infographic avy amin'ny SEO Sherpa maneho tsara ny paikady.
Naoty iray momba an'io, mampitandrina ny amin'ny atiny misy dikany ny infographic. Doby feno mety ho olana raha tsy mampiasa rohy kanônika ianao hanosehana ny fahefana amin'ny lahatsoratra voalohany, saingy tsy manasazy an'i Google.
Tags: automatiquecloakingpejy eo am-baravaranaduplicate contentGoogle +lahatsoratra miafinaKeyword stuffingfifanakalozana rohyfambolena rohyrohy spamvita vita seoseo organikaLahatsoratra bilaogy karamarohy mandoamotera fanatsarana moterafikarohana OptimizationSEOatiny manify
Mar 10, 2014 amin'ny 7: 11 AM
Misaotra nizara ny infografika Douglas! Fintino tsotra fotsiny izay ilaiko momba ny fototry ny SEO Organika.
Mar 11, 2014 ao amin'ny 9: PM PM
Douglas, tena tiako ilay teboka momba ny tsy fanodikodinana ireo motera fikarohana. Ny famoronana votoaty tsara araka ny nasongadin'ny infograhpics anao dia ny fanaovana ny asa hamoronana atiny sarobidy izay mahafaly an'i Google fa ny tena zava-dehibe dia mahafaly ny mpamaky anao. Farany dia momba ny mpamaky izany. Tian'izy ireo izany ary mahazo lanja amin'izany, miverina izy ireo ary manondro ireo namany. Be loatra ny mpivarotra ankehitriny mampianatra paikady haingana izay tsy misy heriny mijanona. Fampahalalana tsara. Misaotra amin'ny fizarana.
Mar 15, 2014 amin'ny 5: 26 AM
Tonga hatrany amin'ny @ disqus_3MEg2e280Z: disqus! Ny filaharana amin'ny fikarohana dia lalao maharitra sy vokatry ny marketing amin'ny atiny. Misy vitsivitsy (raha misy) tetika haingana izay miteraka valiny SEO maharitra ao amin'ny tranonkala semantika.
Mar 15, 2014 amin'ny 5: 12 AM
Misaotra anao nizara an'ity tamin'ny mpamaky anao Douglas. Manantena aho fa hahazo tombam-bidy amin'izany izy ireo 🙂 James ~ SEO Sherpa
Mar 27, 2014 amin'ny 9: 19 AM
lahatsoratra mahafinaritra..ny tena izy, ny SEO voajanahary ihany no tokony harahina satria ny SEO voamboatra dia hitondra fahombiazana vetivety aminao fa tsy maharitra ela. SEO biolojika dia mitondra valiny maharitra maharitra.
Dec 2, 2014 amin'ny 2: 35 AM
Fananganana tranokala tsy misy famenoana fitendry sy votoaty manify - SEO voajanahary ve ity? Vaovao io aminay ary vaovao tsara tokoa izany! Mandritra izany fotoana izany dia maro no niditra tamin'ny SEO namboarina ary manaitra izany, indrindra fa ny organika no tokony hampiasaina.